विराटनगरमा महाभोज मञ्चन हुँदै
२०७६ माघ २१ मंगलबार ११:४४:००
काठमाडौं । नाटक महाभोज अब विराटनगरका दर्शकले हर्ने पाउने भएका छन् । माघ २२ र २३ गते विराटनगर गुरुकुलमा नाटक मञ्चन हुने छ ।
२२ गते दिउँसो १२ बजे र साँझ ४ बजे तथा २३ गते दिउँसो १२ बजे नाटक मञ्चन हुने कलाकार सिर्जना सुब्बाले जानकारी दिइन् ।
काठमाडौंको मण्डला थिएटरमा केही समय अगाडि मञ्चन गरिसकेको नाटक सुशीला कोइराला नाटकघर, आरोहण गुरुकुल हाटखोलामा नाटक देखाउन लागेको हो ।
अनुप बरालले निर्देशन गरेको नाटकमा रमेश बुढाथोकी, राजन खतिवडा, सिर्जना सुब्बा, विजय बराल, बुद्दि तामाङ लगायत कलाकारको अभिनय छ । विराटनगरमा मञ्चन हुने नाटकमा भने सिर्जनाको ठाउँमा दिया मास्केले अभिनय गर्नेछिन् ।
‘महाभोज’ समकालीन समाजको बिद्रुप अनुहार हो । समसामयिक नेपाली राजनीति, पत्रकारिता र दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको यथार्थ चित्रण हो महाभोज । चुनाव नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु कसरी साम, दाम, दण्ड र भेद अपनाउँछन् ? नाटकले देखाएको छ । समाजमा नैतिकवान राजनेताको छवी बनाएका नेतासमेत आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न र आफ्नो हैंसियत जोगाइराख्न केके सम्म गर्न तयार हुन्छन् ? नाटकले उठान गरेको छ ।
निर्धन दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई राजनीतिको गोटी बनाउन नताहरुका प्रपञ्चलाई पनि उदाङ्गो पारेको ‘महाभोज’ समानान्तर रुपमा अरु विषयलाई उठान गरेको छ । अरुकै लागि सधैँ गुलामी गरिरहेको एक दलित बस्तीको कथा भन्दै नाटकले समग्र गरिब दलितहरुको कथा भनेको छ । पत्रिका विकाउन सम्पादकले अपनाउने तिकडम पनि नाटकले समेटेको छ ।